Isiokwu Mmekọrịta Ọha na Ọha | Martech Zone |
Ngwaọrụ, nyiwe, na omume kacha mma maka ndị na-emetụta mmetụta na mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na Martech Zone.
Nlekọta anya nke ụlọ ọrụ mere n'oge ọrịa na -akpaghasị usoro ọkọnọ, omume ịzụ ahịa, yana mbọ ahịa anyị jikọtara na afọ ole na ole gara aga. N'uche nke m, mgbanwe ndị ahịa na azụmahịa kacha ukwuu mere na ịzụ ahịa n'ịntanetị, nnyefe ụlọ, na ịkwụ ụgwọ ekwentị. Maka ndị na -ere ahịa, anyị hụrụ mgbanwe dị egwu na nloghachi na itinye ego na teknụzụ azụmaahịa dijitalụ. Anyị na -aga n'ihu na -eme karịa, gafee ọtụtụ ọwa na ndị na -ajụ ase, yana ndị ọrụ pere mpe - chọrọ anyị
Akụrụngwa abụghị naanị ịzụrụ ihe; ọ bụ mmekọrịta. Ka ọ na-etolite ma na-emelite iji mezuo ihe teknụzụ chọrọ, mmekọrịta ahụ na-eto n'etiti ndị na-eweta ngwanrọ na onye njedebe-onye ahịa-ka usoro ịzụ ahịa na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Ndị na-eweta ngwanrọ-as-a-service (SaaS) na-enwekarị ọmarịcha ọrụ ndị ahịa ka ha wee dịrị ndụ n'ihi na ha na-etinye okirikiri ịzụ ahịa mgbe niile n'ọtụtụ ụzọ karịa otu. Ezi ọrụ ndị ahịa na-enyere aka hụ na afọ ojuju ndị ahịa, na-akwalite uto site na mgbasa ozi mgbasa ozi na ndị na-ekwu okwu ọnụ, ma na-enye
Ihe Mere I Ji Kwesị Buyzụta weebụsaịtị Ọhụrụ
Thursday, July 29, 2021 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 8, 2021 Douglas Karr
Nke a ga-abụ obi ọjọọ. Ọ dịghị otu izu na-aga na enweghị m ụlọ ọrụ na-ajụ m ego ole anyị na-akwụ maka weebụsaịtị ọhụrụ. Ajụjụ ahụ n’onwe ya na-ewelite ọkọlọtọ na-acha uhie uhie jọrọ njọ nke na-apụtakarị na ọ bụ igbu oge m ịchụso ha dịka onye ahịa. N'ihi gịnị? Maka na ha na-elele webụsaịtị dị ka ọrụ static nke nwere mmalite na njedebe. Ọ bụghị… ọ bụ ọkara